Archive du 20171031
Tany misy ny Villa Elizabeth Karana no nividy azy
Nanazava mikasika ny antsipirihan’ny raharaha Villa Elizabeth, fonenan’ny filoham-pirenena teo aloha nodimandry,
Minisitra Tazafy Armand « Misokatra ny Tiko AAA rehefa mahafeno fepetra »
Nanamafy indray omaly alatsinainy ny minisitry ny Indostria Tazafy Armand fa tsy afaka misokatra ny orinasa Tiko AAA ao Antsirabe raha tsy feno ny fepetra rehetra.
Honoré Rakotomanana Manangona olona hiaro azy
Notoloran’ny filohan’ny antenimierandoholona Rakotomanana Honoré baolina miisa 25, tetsy Anosikely ny alatsinainy 30 oktobra 2017, ny fikambanan’ny tanora mpanao Rugby avy amin’ny boriborintany enina eto Antananarivo Renivohitra, notarihan’ny filohany Rakotondrafara Heriniaina.
Claudine Razaimamonjy Mbola olon’ny HVM, hoy i Rivo Rakotovao
Nanamafy tao amin’ny radio nasionaly (RNM) ny alahady alina teo i Rivo Rakotovao fa mbola olon’ny HVM ary mpikambana feno ao i Claudine Razaimamonjy izay migadra any amin’ny fonjan’i Manjakandriana noho ny raharaha kolikoly avo lenta.
Mpitondra sy vahoaka Be loatra ny elanelana, mikatso ny asa fampandrosoana
Tsikaritra amin’ny fisian’ny valanaretina pesta amin’izao fa misy olana eo amin’ny serasera sy fifandraisana,indrindra eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka amin’ny ankapobeny.
Hendry ve sa adala ?
Miarahaba jean a, ary manomboka mampiseho ny tena endrikao amin’izay ianao a ! Eny e sarotra aloha ny toerana misy anao e, tsy mora koa ny nahatongavanao teo ka mety izay no mahataonga anao tsy hanaiky akifika mora foana.
Tontolon’ny fitsarana sy ny politika Nodimandry i Mathilde Rabary
Nodimandry omaly alatsinainy 30 oktobra i Mathilde Rabary, vehivavy fanta-daza teo amin’ny tontolon’ny fitsarana sy ny fanaovana politika teto Madagasikara, ary renin’ny minisitry ny fanabeazam-pirenena ankehitriny Paul Rabary.
Zaza kamboty ao Ambatolampy Nanolotra bodofotsy sy kits scolaire avy amin’ny Star
Tsy manadino ireo zanaky ny polisy lavo am-perinasa beazina sy karakaraina ao amin’ny toby fitaizana zaza kambotin’ny polisim-pirenena ao Ambatolampy ny
Farihin’ Andranomaimbo –Antsirabe Nahitana fatin-dehilahy
Nahitana fatin’olona indray ny farihin’Andranomafana na Andranomaimbo amin’ny ahafataran’ny maro azy.
Boxe Chinoise Lei-tai Mbola mahery ilay Malagasy Jean Christian
Norombahin'ilay teratany Malagasy, Randriamalaza Jean Christian izay hany solontena Malagasy niatrika ny fifaninana, fanim-balony indray ny amboara eran-tany eo amin'ny taranja Boxe lei-tai sy Kick Full.
Edito Veloma ianao!!
Tsy mba nanan-tsafidy fa nanaiky izay niseho ireo rehetra lasan-ko razana na ny lasa efa ela na ireo nandao ny tany vao haingana.
Ambohitravao Talatamaty Tsy misy pesta izany, hoy ny Ben’ny tanàna
Na dia efa nahoraka be aza ny feo fa aretina Pesta no nahazo ilay lehilahy iray nianjera nanoloana ny toeram-pivarotam-panafody tao Ambohitravao Talatamaty omaly maraina dia voaporofo omaly atoandro ihany fa tsy fahatsiarovan-tena nateraky ny fisotroan-toaka diso tafahoatra no nahazo ity farany.
Kaominin’Ivato Notondrahana fanafody maimaim-poana ny isan-tokantrano
Na dia tsy mbola nahitana olona iray matin’ny aretina Pesta aza hatreto ny ao amin’ny kaominina Ivato dia mitohy hatrany ny asa fanadiovana tanterahin’ny kaominina, raha araka ny fanazavan’Andrianjakarivony Manitra, lefitra voalohan’ny Ben’ny tanana ao an-toerana.
Nanamafy indrray omaly alatsinainy ny minisitry ny Indostria Tazafy Armand fa tsy afaka misokatra ny orinasa Tiko AAA ao Antsirabe raha tsy feno ny fepetra rehetra ;
Orinasa Lazan’i Betsileo Bokan-trosa 2,6 miliara ariary
5 volana teo ho eo no nametrahana ny mpitantana vaovao eo anivon’ny orinasa mpamokatra divay “Lazan’i Betsileo” any Fianarantsoa noho ny olana teo amin’ny fitantanana teo aloha,
Sekoly tsy miankina Nisy efa nanomboka nianatra omaly
Na dia sekoly tsy miankina vitsy teto an-drenivohitra ihany aza omaly no nanokatra ny varavarany mba handraisana mpianatra taorian’ny nanambarany fa tsy hanaraka ny fanapahan-kevitry noraisin’ny DNELM izy ireo dia roso hatrany ny diany fa tsy nihemotra.
Jiolahy 11 voasambotra Tsy ampy taona ny efatra
11 lahy no voasambotry ny polisin’ny boriborintany fahatelo Antaninandro amin'ny resaka famakiana fiara sy fanendahana.
Nirefodrefotra ny basy teny Anosibe “Cash point” iray voatafika
Toerana fanakalozana vola amin’ny alalan’ny finday na “Cash point” iray no notafihin’ny jiolahy mirongo basy teny Anosibe teo ampitan’ny farmasia omaly tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro.